Anne Faber, vehivavy manan-tsaina amin'ny 25 amin'ny bisikileta, talohan'ny andro mafana sy ratsy: Martin Vrijland
Ny vehivavy manan-tsaina amin'ny 25 dia manapa-kevitra ny haka ampahany matanjaka amin'ny fampiofanana azy, raha toa ka efa mialoha ny hariva ny toetr'andro ratsy? Moa ve tsy nananan'i Anne Faber fampiharana izay nahazo tatitra toy izany? Tsy namaky ny vaovao ve izy ireo? Nanao selfie hafa izy ho an'ny namany. Tsy namaly ny fanontaniana momba ny zavatra tiany hatao ve izy? Maninona no tsy henontsika ny naman'i Anne na ny ray aman-dreny, kanefa misy dadatoako manao mozika ankehitriny ao amin'ny Telegraaf mba hiantso? Inona no nanapa-kevitra an'i Anne mba handingana ny lalan'ny ANWB?
Mazava ho azy fa te-hiondrana any amin'ny fanandramana manaraka isika rehetra, saingy tokony hampitandrina antsika izany. Isaky ny misy hipoka ny haino aman-jery nasionalin'ny firenena, dia miaraka amin'ny fisarihana maro tsy miankina amin'ny fampiasana teknolojika tapakila sy ny toy izany. Miala amin'ny mistery ny vahoaka ary adinon'izy ireo ny manadino ny fanontaniana manan-danja indrindra. Mazava ho azy, ny fanontaniana dia ny hoe aiza i Anne, fa aza adino ny mametraka ireo fanontaniana izay manome ny fahatsapana ara-tsaina amin'ny fidirana ao anatin'ilay fiara tsy mandeha amin'ny bisikileta.
Inona, ohatra, no mety ho fanontanian'ny media matanjaka?
Matetika i Anne no nandeha bisikileta tamin'ny zoma tolakandro mba haka ny lalan-tsoran'ny ANWB amin'ny alàlan'ny rivotra sy ny rivotra ary mialoha ny haizina?
Ahoana ny fifandraisany tamin'ny sipany?
Taiza ny namany tamin'io fotoana io?
Iza no nifandray taminy noho izy tsy hita?
Ary dia toy izany koa
Ireo fanontaniana ireo ihany koa dia manatsara ny fahatsapana ny fahazoana fahalalana amin'ny teknika. Sa ny fikasana angamba? Fanontaniana toy ny: Inona ny fifandraisana amin'ny media sosialy? Iza no nifandray tamin'izy rehetra talohan'ny tsy hita? Inona no noresahina? Manana daty maivana ve izy? Iza no nahavita azy araka ny tantaran'ny telefaona?
Ny fitsangatsanganana an-dalan'i Anne Faber dia ny ampaha ambin'ny folo ambiny. Tany am-piandohan'ity dia nanana fotoana Anass Aouragh, Jeroen Denis sy ny zanany roa lahy (Ruben sy Julian), Romy sy Savannah ary mety manadino vitsivitsy kokoa. Raha ny tranga goavana sy ny haino aman-jery dia mihitsoka, dia matetika ny zava-mitranga mampalahelo hatramin'izao. Raha toa manararaotra tsara kosa ianao, dia toa tsy manaiky fa mety misy tantara natao ho fampiroboroboana ny fampiasana teknika. Real-time Big Data avy amin'ny haino aman-jery sosialy fitondran-tena dia ahafahana mandrefy ny fihetsiky ny olona toy izany toe-javatra tsy hita. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manipika ny fihetseham-po eo amin'ny vahoaka sy ny fomba haingana na mora hanaiky ny sary iray izay napetran'ny media ho marina. Saingy ambonin'izany, ny tsy fahombiazan'ireny fahadisoana ireny dia mitaky fampiharana haingana sy ara-drariny ny fitaovana teknika toy ny telefona telefonina.
Inona no nahagaga tamin'izany? de Telegraaf Ity maraina ity dia antso iray antsoina hoe fianakaviana manahy. Tsy vitan'ny hoe te hampiasa ny tafika ny fianakaviana, fa koa ny finday dia nampiasaina tamin'ny alalan'ny AIVD mba hamahana ilay raharaha. quote:
Tian'ny fianakaviana ihany koa hikaroka bebe kokoa amin'ny tompon'andraikitra ny polisy, ohatra amin'ny alàlan'ny fampielezana ny fifamoivoizana finday any amin'ny faritra izay nahitana an'i Anne tamin'ny farany, na tamin'ny ampahany tamin'ny lalam-pivezivezeny.
Izany miaraka amin'ny sary mety fakan-tsary dia afaka manome mazava tsara raha toa ka azo inoana izany.
Ity karazana fandinihana goavana amin'ny finday ity dia azo atao ara-teknika, azo antoka fa amin'ny fanampian'ny manam-pahaizana avy amin'ny AIVD. Ity sampam-pitsikilovana ity dia mampiasa ireo manam-pahaizana izay afaka mahavita zavatra maro ary azo antoka fa hanampy amin'ny tranga toy izany.
Mazava ho azy, ny polisy dia nanana fahafahana hitsidika telefona raha misy lalàna tsy hita mialoha ny famoahana lalàna (na ny 'lalànan'ny torimaso'). Tsy maintsy neken'ny mpampanoa lalàna izy io, saingy tsy nandany ora maro izy. Ho an'i Anne koa dia azo atao avy hatrany ny hetsika. Tamin'ny andron'ny fanjavonana (na farafaharatsiny ny ampitso maraina), noho ny fandraketana an-tariby, dia nisy angidimby niaraka tamin'ny fakantsary FLIR (fakantsary hafana mitady izay hahitana ny fahasamihafana amin'ny mari-pana, na dia misy olona iray aza maty) dia tokony ho avy any an-tsambo ary ny ekipa iray mpanafika alika dia mety navoaka. Amin'izay dia mety ho efa voamarina tanteraka ny lalan'i Anne. Izany dia tsy mivantana nitranga sy Izany fahamendrehana izany dia mahagaga loatra amin'ny teny.
Tahaka ny hoe ny olona dia nilalao niaraka tamin'ny olona tsy hita popoka nanodidina an'i Anne Faber, izay tokony hametraka ny fahafahana ara-teknika amin'ny 'lalàna famonoana' amin'ny fahazavana tsara. Ny findain'ny tsirairay ao amin'ny manodidina ny lalan'ny bisikileta ANWB dia tsy maintsy raisina amin'ny fomba miverimberina. Avy eo dia misy ny Big Data (anisan'izany ny sarimihetsika karaoty sy feo avy amin'ny smartphones sns ...) angamba misy fifandraisana amin'i Anne; Izany angamba ny toerana. Ary ny 'lalànan'ny torimaso' dia mbola mety hahazo sary tsara. "Tsara tokoa fa misy lalàna mitifitra!"
Ny fahitana an'i Anne Faber miasa ao amin'ny orinasa famokarana teatra Het Huis ao Utrecht, dia tsy navela hijery. Tsy mihevitra isika fa mifampiraharaha amin'ny mpilalao sarimihetsika iray izay mety hahazo ny famantarana vaovao hanalefaka ny làlana Waikiki taorian'ny reny mpikaroka plastika. Tena manjombona sy maharikoriko tokoa ny fianakaviana sy ny namana ary ny zavatra. Mieritreritra isika fa misy olona tsy hita popoka ary miaraka amin'ny tantara mahatsikaiky momba ny fianakaviana. Somary hafahafa kely ihany koa ny tsy henoantsika namana sy ray aman-dreny ary hafahafa fa mahita antso ho an'ny fepetra momba ny torimaso isika.
Na dia mpandefa ny mailaka avy amiko aza lahatsoratra teo aloha nanolo-kevitra fa amin'ity indray mitoraka ity dia azo atao izanyOlana, fihetsika, vahaolana'Mankany amin'ny fanaraha-maso bebe kokoa bosrijke- sy ny faritra ivelan'ny trano, dia azonao atao ny mangataka foana isika raha vaovao ny tsaho manaraka ny fampiharana ny' to nanindrona antsy sleepwet 'ao tsara ny heviny. Satria raha misy tranga toy izany Romy sy Savannah ny fandevenana mampiahiahy (sy be haingana loatra) sy ny tantara dia rattling manodidina ny ahiahiana, tsy afaka manavaka ny haino aman-jery sy ny polisy dia afaka hiverina olona iray mihitsy aza ny maty toerana araka ny manompo ny tanjona ambony kokoa. Tsy afaka manaisotra ny zava-misy fa ny olona dia lazaina fa mamitaka sy mamitaka mba hanosika ny lalàna.
Tsy maro loatra hoaxes isika amin'ny alalan'ny amin'ny alalan'ny haino aman-jery na sy ny polisy, fitsarana sy ny politika dia azo nentina ambaratonga namitaka ny maimaika hanao zavatra. Tsy azo atao tsotra izao izany, izany no hevitra, satria maro ny olona tsy maintsy mandainga ary milalao lalao amin'izany. Ary ny vahoaka dia afaka manao izany, tsy manantena isika satria tsy ho vitantsika izany. Fa rehefa orona an-tapitrisany maro no hahazo tari-dalana ao amin'ny iray sy ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana te-hamihina ny vahoaka, dia tsy maintsy ho azo antoka aloha izy ireo tonga tao an-fomba izay dia hanaiky ny fiainana manokana tapaka (izay misy olona salama saina dia handà ara-dalàna).
Inona no ilainao amin'izany? Olana iray izay misy fiantraikany eo amin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo mampihetsi-po sy manakiana ny fepetra efa nomaninao teo amin'ny talantalana. Ny lalao dia ny 'Olana, fihetsika, vahaolana. Ny hany fomba ny mahafantatra fa tsy mampaninona ny olona fa ny telefaonina na ny PC dia mety ho nijirika sy amin'ny fotoana tena mety-hohainoana ny polisy, ny rariny sy ny AIVD, dia amin'ny alalan'ny fanaovana azy ireo hatahotra ny horohoro na amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo ny fihetseham-po Afaka miaina miaraka amin'izany ny fiainana. Mety ho tsapanao ankehitriny fa mety ho voavonjy ny fiainan'i Annea amin'ny fampiharana ny 'lalànan'ny torimaso'? Azontsika atao ve ny manantena fa tsy ho ela i Anne? Mety hiverina amin'ny iray isika Raharaha Caseyavelli manao? Machiavelli? Iza? Hey, Tsia, bah, fisainana fikomiana, zavatra ho an'ny idiots! (Vakio ny mitohy eto)
Lisitry ny rohy loharano: telegraaf.nl, telegraaf.nl
Ny fitsapa-kevi-bahoaka manohitra ny lalàna manodinkodina dia tsy tena te-hisidina
Ny antontan-kevitra momba ny heloka Krimea (CAS) ho an'ny angona lehibe 2.0?
Ahoana ny fomba hahafantaran'ny fanjakana ny toerana misy anao, inona no ataonao, mividy sy mivarotra
Tags: Anne Faber, ANWB, Baarn, family, Featured, bisikileta, cycle route, The House, tafika, tonga nirohotra, rahalahin-drain'i, Nenibe bisikileta, antso, habetsahan'ny, Ruben sy Julian, Mitondrà lalàna, finday, Telegraph, teatra, orinasa famokarana teatra, uitpeilen, Utrecht, very, namana
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 10: 56
"Fantatray fa tamin'ny enim-bolana teo ho eo dia namela ny namany nahafantatra tamin'ny Whatsapp fa any Hollandsche Rading izy. Maherin'ny antsasak'adiny aty aoriana, ora 18.50, dia mandefa ny tenany ho namana izy. Hitany fa ao anatin'ny orana izy. Ny endriky ny tenany dia natao tao Baarn teo amin'ny fihaonan'ny Hilversumsestraatweg / Amsterdamsestraatweg. "
Noho izany raha fony izaho ilay namako dia niantso avy hatrany aho nanao hoe: "Hey, inona no hataonao? Taiza ianao? Tsy handeha hamakivaky ity toetrandro ratsy ity ianao ary vao mialoha ny haizina? Tonga eto aminao aho! Mijanòna eo amin'izay misy anao! "
Na izany zavatra izany.
tedsdam nanoratra hoe:
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 11: 15
Lasa natahotra izy ireo.
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 11: 21
Izy ireo dia namaky mazava tsara ..
Zoma nanoratra hoe:
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 11: 46
Raha ny marina dia manamboatra fitaovana fitifirana izy ireo, mba hahitan'ny olona rehetra fa tsy misy olana amin'ny fanaraha-maso tsy tapaka anao na aiza na aiza, satria ilaina izany! Miafara fa izany dia mitranga marina amin'ny fotoana izay handoavam-bola bebe kokoa (Lubach sy ireo mpianatra miaraka amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka).
Vespucci nanoratra hoe:
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 12: 02
Tsy misaraka amin'ity lahatsoratra ity sy avy amin'ilay lahatsoratra omaly eto amin'ny tranonkala aho, dia tonga tamin'ny hevitra toy izany. Nanaraka ny andro farany aho ary misy lafiny tena miavaka amin'ity tantara ity. Ireo pejy Facebook-n'ny namana sy Anne dia hafahafa ihany koa, farafaharatsiny talohan'ny nametrahany ny antsony. Raha nisy loza, dia efa nahita cyclists hafa izy. Raha ny fijeriko azy dia mety ho efa ela no nijery ny ADN teo amin'ilay jaky ary nisy vokany izany.
Saingy mbola azo inoana fa ny akanjony no azy. Raha misy palitao maitso hita ao amin'io faritra io, dia izy no azy.
Nesorina ny finday teo anelanelan'i Den Dolder sy Huis ter Heide. Toa amiko fa tsy niaraka tamin'ny batterie foana izy, ka nisy olona hafa nanala ny telefaona. Avy eo dia manomboka mitady toerana hafa tanteraka izy ireo.
Omaly no nalefa tao amin'ny lahatsoratra teo aloha fa ny mitora sy Eemlander namoaka lahatsoratra izay efa nifandray ny AZC kilometatra vitsivitsy monja miala ny manodidina, fa ny mpitondra tenin'ny hoy ny mpianatra amin'ny fitantanana morontsiraka coolly fa ny polisy dia tsy mbola misy.
Tao anatin'izay volana vitsivitsy lasa izay, nisy fandrobana maro natao tao amin'ny faritra nataon'ireo vahiny miteny vahiny. Ireo mpitaingina bisikileta dia notafihan'ny lehilahy nivoaka avy tao anaty kirihitra ary nitondra ny bisikiletany niaraka tamin'izy ireo. Nisy ny tranga maro tao amin'ny manodidina. Mazava ho azy, amin'ny maha polisy anao, dia ho hitanao ny fototry ny AZC na ny bisikileta mety ho ao. Tsy nanao izany izy ireo. Raha nilaza ny mpitondra tenin'ny mpitandro filaminana fa izany no izy.
Ary nahoana no mahatsapa ho toy ny setroka izany, manontany tena aho. Fa satria maro loatra ny zavatra hafahafa ao anatin'ity tantara ity. Tsy manao fanatanjahan-tena toy izany ianao amin'ny alin'ny zoma tolakandro. Nankany amin'ny fampakaram-bady koa izy ny hariva, namaky teny aho. Hafahafa izany, sa tsy izany?
Mahatsiaro ho toy ny nananganana ny tantara ary ny vatana sasany dia mandinika ny fomba fihetsiky ny mpanatrika amin'ny media sosialy.
Heveriko fa tsy misy i Anne ary ny sipany dia tsy izany. Izy ireo dia manana endrika / avatars.
Fa avelao aho hanantena fa diso tanteraka aho ary hita ankehitriny na rahampitso, na velona na tsia.
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 12: 34
Tsy afaka mahita ny Facebook pejy Nathan Fidder ny olon-tiany, nefa ho hitantsika ny zavatra ho avy hafa afa-(afa-tsy ny fanehoan-kevitra ao amin'ny sehatra fiadian-kevitra Troll).
Camera nanoratra hoe:
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 12: 26
Afaka mandre izany ve isika, amin'ny maha olom-pirenena azy? Enga anie ianareo ho olom-pirenena mbola hitady ny mpifanolobodirindrina manodidina anao, tsy noho izany satria navotsotra ilay sara. Nahoana no latsaka ny tany? MANDEHANA ny zava-drehetra. Nahoana ny olona sasany no avela hikaroka ary ny hafa tsy manao izany, dia lalàna koa izany.
Ahoana no ahazoan'izy ireo antoka fa ny toerana misy ny fiara iray dia efa afaka izy
Fa izahao toetra tahaka ny telegrama nikarakara fikarohana tranainy avy any Afghanistan, dia afaka na dia mikaroka manerana izao tontolo izao raha toa ka misy tokoa ny fiara ampiasaina. Raha ampiasaina ny alika rehetra any Holandy, eny fa toa mihabetsaka kokoa.
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 12: 37
Miverimberina ny valiny amin'ny server .. Ity no mpamatsy:
Ny mpizara anao dia manana fitohanan'ny fifamoivoizana nefa mbola mitazona izany. Miasa amin'ny 17 fangatahana isaky ny faharoa sy ny fangatahana 120 amin'izao fotoana izao ianao. Manontany tena amin'ny ankamaroan'ny server ianao. Saingy mbola mihazakazaka izy. Azo atao izany amin'ny farany, saingy mora foana ny mahazo izany.
17 fangatahana / sec - 417.3 kB / faharoa - 24.5 kB / fangatahana
Ny fangatahana 120 dia amidy amin'izao fotoana izao
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 21: 22
Izany dia midika hoe nahavita hianjera ny lohamilina tamin'ny fanafihana, mamela ny olona hitsidika ity Ndao aza manaiky intsony ny nizara zavatra tsy hovohana. Amin'izany fomba izany no ahafahan'izy ireo "mivezivezy" amin'ny tranonkala ary manosika anao hiala izy ireo.
Ny mpizara dia efa mihazakazaka indray izao, fa ny isan'ny mpitsidika dia nihemotra taorian'ny tampon'ny 50 arivo.
Misy fomba maro hanafoanana ny fahalalahana maneho hevitra. Ankoatra ny Facebook Sivana, ny trolls izay mifidy ny anti-Martin Vrijland fifidianana anaty bilaogy sy ny sehatra fifanakalozan-dresaka, sns Izany no 1 avy ao amin'ny trano fitehirizam-piadiana.
Richi nanoratra hoe:
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 13: 47
Tokony hino marina ve ny zava-misy marina? Ary ny toerana misy ny angovo fampitaovana? Miseho fa ny fahamarinan'ny fanadihadiana momba ny toerana ao amin'ny faritra be mponina dia ratsy lavitra noho ny kilometatra!
Ny soso-kevitra isan-karazany dia efa natsangana ny habaka toerana izay tsy azo antoka tanteraka. Ahoana raha mitady fomba hafa ianao? Moa ve "marina" izy ireo handresy fotoana betsaka araka izay azo atao?
Tsy ho gaga aho raha toa ka manadino fa ny lalana dia tanteraka amin'ny dian-tongony.
Sokafy ny masonao nanoratra hoe:
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 16: 26
Tiako ihany koa ny hanome ny hevitro momba ity raharaha hafahafa ity.
Voalohany indrindra, Hitako ho tena hafahafa ny handeha ho lehibe mitaingina bisikileta manodidina ny antsasaky ny dimy, raha misy mampidi-doza mihitsy aza ny ratsy, ary Weather mialoha. Tsy nanara-maso azy io ve izy? Nanana kitapo kely izy, ka azo nomanina angamba. Ny fitetezana bisikilety izay hataony dia singa goavambe iray, izay tsy maintsy miasa mandritra ny ora vitsivitsy ianao. Teo an-dalam-pandinihana ihany koa ve ny famerenana ny tsangambato manontolo? Ny zava-misy dia tiany ny mandeha bisikileta, saingy tsy azoko an-tsaina fa manao izany ianareo amin'ny faran'ny tolakandro, miaraka amin'ny toetr'andro ratsy, ny ampahany lehibe, irery, ary avy eo dia aza miteny amin'ny namanao izay alehanao ary rehefa mieritreritra ianao fa miverina. Nahoana no tsy nanontany azy ny namanao hoe aiza izy no hiverina? Nahoana no navelany handeha io ampahany lehibe io? Amin'ny ankapobeny dia tsy manoro hevitra ny zavatra toy izany (raha tsara tarehy ny toetrandro, tantara hafa izany). Saingy manodidina io fotoana io dia miha-maizina sy haingana kokoa. Raha handeha hanao fitetezana bisikileta toy izany izy dia ho fantany fa tsy maintsy mandeha bisikileta mandritra ny fotoana maharitra izy. Tsy azoko an-tsaina izany.
Mbola zavatra hafa hafahafa ihany koa ny Facebook-ny. Omaly dia nisy ny lahatsoratra sasantsasany tamin'izany. Jeneralin'ny zavatra rehetra. Tsy misy zavatra mifanentana amin'ny vehivavy 25, na inona na inona manokana. Lahatsoratra sasantsasany izay nozaraina. Heveriko fa tena malaza izy. Saingy tsy manana namana ao amin'ny Facebook izy. Androany aho dia nijery indray ary nesorina tao amin'ny pejiny avokoa ireo lahatsoratra nizara. Nahoana?
Mitady ny heriny sy ny heriny rehetra ny tsirairay. Efa herinandro, aiza ny ray aman-dreniny? Nahoana no miteny ny dadatoany? Angamba loatra ny alahelony?
Ankehitriny ny dadatoany dia manandrana manamarina fa tena mahazatra azy ny manao bisikileta lava be, dia nanao izany matetika izy. Mety misy izany, nefa tsy ara-dalàna amin'ny faran'ny tolakandro, ary amin'ny endriny manokana, singa goavam-be mikaroka, miaraka amina kitapo (izay heveriko fa manana zavatra izy) fa tsy mijery ny toetr'andro Ataovy izany, dia mamakivaky ny orana, mamono tena ary manohy ao anaty haizina. Ahoana no nanantenany ny hody? Mamakivaky ny lalana rehetra? Ny namanao dia tsy niteny indray mandeha hoe: "Hanao izany ve ianao izao? Manao dia lavitra toy izany? Tsy aleo ve miverina any an-trano? "Sa kosa hoe:" Tsy ho avy haka anao ve aho? " Tsy voatery hieritreritra hoe misy olona tia an'izany, mandalo amin'ny toetrandro toy izany. Ankehitriny ny dadatoany dia manao toy ny hoe izy no zavatra mahazatra indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Avy tampoka izany fiheverana goavana izany, dia ny fikaroham-pirenena fotsiny. Maro ny zavatra tsy mandeha. Mahaliana ahy ny vokatra.
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 17: 40
I fahazoan-dalana iray tsirairay mba hamaky io boky torolalana PSYOP miaramila, mandre ny zavatra rehetra isika, ary mamaky Natao maintsy manalavitra antsika hiala "vahaolana", izany hoe misy fanahy iniana nitendry lokanga tamin'ny (faobe) fihetseham-po amintsika amin'ny alalan'ny dialectic vahaolana mahazatra (ary ) mba hahazoana. Indrindra fa ny 'Phase II' dia mazava tsara ary maneho fa eo anelanelan'ny vanim-potoana 2 sy 3 an'ny PsyOp.
"Ny dingana fito-dingana PSYOP dia fitsipika nomerika, tsy misy tarigetra
Ny PSYOP dia nomanina ary natao ho fanohanana na (ISO) misiona marobe.
Ny tanjona fototra momba ny dingana PSYOP dia vita tsara sy vita tsara
PSYOP amin'ny mpihaino tariby mendrika indrindra (TAs) mifanentana amin'ny fampiasana azy
tsara amin'ny tanjona nasionalin'i Etazonia. Hanampy ny miaramila PSYOP amin'ny fanatanterahana izany
tanjona, ity boky ity dia manolotra TTP, izay tafiditra ao anatin'ny dingana tsirairay avy
ny dingana. Ireo TTP ireo dia avy amin'ny feo sy ny siansa azo ampiharina
fomba sy paikady.
FIZARANA I: FAMPIANARANA
Ao amin'ny tanjona I, tanjona ara-psikolojika (POs), manohana ireo tanjona sahanin'ny psycholojika
(SPOs), ny mpihaino kinendry (PTAs), ary ny fepetra fanombanana voalohany. Mpanazava mpiasa
mitarika amin'ny maha-rafitra fanapahan-kevitra ara-miaramila (MDMP), ary matetika miaraka amin'ny
ny fampahafantarana manokana sy ny faritra manokana azo avy amin'ny fanombanana ny fitsaboana sikolojika
ekipa. Mandritra io foto-kevitra io, dia mamolavola ireo taratasy ho an'ny iraka mpanohana ny fanohanana. POs dia
amin'ny ankapobeny, ny solontenan'ny PSYOP avo lenta amin'ny sehatra, ary manome ny
drafitra ho an'ny fampandrosoana ny plan PSYOP.
FASE II: FAMPITANDREMANA TARGET AUDIENCE
TAA no dingana izay fomba amam-panafarana sy fandinihana ny PTA
fitondran-tena. Ny tetikasam-panadihadiana ho an'ny mpihaino (TAAW) dia ny antontan-taratasy manasongadina ity fanadihadiana ity.
TAAWs maro no trandrahana mandritra ity dingana ity. TAA no tanjona tokana manan-danja indrindra amin'ny fandrindrana ny tsara indrindra
PSYOP. Ny miaramila PSYOP dia tsy maintsy manana fahalalana ampy sy fahatakarana ny TAs mba hivoatra
fomba mahomby hamelezana ny fitondran-tena tsara amin'ny tanjona amerikana.
FAHA III: Fandrosoana ny taona
Ity dingana amin'ny fampiroboroboana ny andian-tsarety PSYOP ity, izay nofaritana sy novolavolaina mba hanampy
Manamora ny fiovan'ny fitondran-tena ao amin'ny TA iray. Amin'ny ankapobeny, ny PSYOP dia misy ny PSYOP
vokatra sy hetsika natao hanatanterahana ny fiovan'ny fihetsika iray ataon'ny TA tokana.
FASANA IV: Fivoarana sy famolavolana ny vokatra
Ny famolavolana ny vokatra sy ny famolavolana dia ny dingana hampidirana ny andian-tsoratra PSYOP ao anaty andian-tantara
ary ny fanaovana ny vokatra manokana na ny fandrindrana ny hetsika kasaina hatao. Tena zava-dehibe ny vokatra sy ny asa rehetra
ao anatin'io andian-dahatsoratra io dia vita ary naverina ho toy ny fonosana. Mandritra izany dingana izany, fanombohana sy fanoherana
Ireo metodolojika dia voafaritra, manohana ny fitaovana fitiliana (fanadihadiana, fanontaniana misy, kritè ary
torolàlana) dia novolavolaina, ary notontosaina ny protetypes.
FIZARANA V: FANAZAVANA
Ny fanekena fankatoavana ny andian-tantara dia atao mandritra ity dingana ity. Tokony hanome soso-kevitra ny mpikaroka
ny fankatoavana izay mamaly teboka manoloana ny ambaratonga faratampony mety ho an'ny manampahefana. in
Miara-miasa amin'ny mpiasan'ny fampahalalam-baovao (IO), ny mpilalao PSYOP no mametraka ny fomba tsotra indrindra
Azo atao ny manamarina fa afaka mahazo antoka fa ny fahazoan-dalan'ny serasera dia tonga ara-potoana sy handray andraikitra amin'ny fivoriana
FAHAFAHANA VI: PRODUCTION, DISTRIBUTION, ary DISSEMINATION
Aorian'ny fankatoavana ny andian-tsarety PSYOP, dia maro ny hetsika manomboka amin'ny fotoana iray. Ny famokarana dia manomboka amin'ny asa
dia nomanina, nandrindra, ary naverina. Raha vantany vao vita ny famokarana, dia voavoatra ny vokatra
ny fampiasana amin'ny ho avy na zaraina amin'ny mpampiasa farany, izay manaparitaka azy ireo amin'ireo TAA voatondro araka ny
talata. Ny fanandramana fitiliana dia vita ihany koa
FASANA VII: EVALUATION
Ny fanombanana PSYOP dia manomboka amin'ny famolavolana ny fepetra fanombohana voalohany mandritra ny dingana I amin'ny
PSYOP (Fandaharam-potoana). Ny PSYOP Soldier dia mandinika ny fironana ara-panandramana ny TA ho fitaovana iray
mamaritra ny mety hahatongavan'ny SPO. Ny fiheverana ny fomba sy ny antony niovaova ny TA dia miankina
noho ny fahitana tsy tapaka sy ny fahitana ary ny fahaiza-manaon'ny PSYOP Soldier. Ny tanjon'ny
Ity dingana manaraka ity, na dia tsy miavaka aza fa mitohy, dia hanamora ny fanovana rehetra mety
ilaina mba hanatsarana bebe kokoa ny andian-tsarety PSYOP. Ny SPO dia tratra ary
raha mahomby ny andian-tantara. Fandinihana ny fanadihadiana ny fiantraikan'ny vokatra, ny fisehoan-javatra mampientanentana, ary ny rehetra
Ny tanjaky ny fitsapam-potoana amin'ny alalàn'ny fomba amam-panao sy ny kalitao. PSYOP Ny miaramila dia afaka mamaritra hoe iza
ny vokatra sy ny fijerena ny vokatra ary ny fanovana amin'ny alalan'ity dingana ity.
Izy io ihany koa dia mamela ny PSYOP Soldier hisafidy raha toa ka ilaina ny fanovana mba hiasana tsara
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 17: 46
Ny filazana fa ny AIVD (sy ny MIVD) dia natolotra tamin'ny fampahalalam-baovao mba 'hanampy' mazava dia manondro fa efa miasa amin'ny fanadihadiana izy ireo. Huis ter Heide dia fotony malaza ho an'ny karazana sampan-draharaham-panjakana isan-karazany, manakaiky azy ary manao fandrindrana cq. Ny fanaraha-maso amin'ny NP (taloha KLPD) dia mora sy mazava.
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 18: 10
... Ary aza adino ny fitantanana ny fahatsapana amin'ny MSM, media sosialy sns. Ireo asa ireo dia mandeha an-tanana.
Misy tetikady sivy ho an'ny fitantanana ny fahatsapana.
1. Fiomanana - Manana tanjona mazava sy mahafantatra ny toerana tsara indrindra tadiavinao ny olona.
2. Fahamendrehana - Ataovy azo antoka ny fampahalalana rehetra ataonao, matetika mampiasa fitsaratsaram-poana na fanantenana mba hampitombo ny fahamendrehana.
3. Fanohanana maro samihafa - Manaova fanamarihana maro sy zava-misy noforonina mba hanamafisana ny mombamomba anao.
4. Fanaraha-maso amin'ny ankapobeny - Fampiasana ireo orinasa toy ny minisitera na sampana fampielezankevitra.
5. Fiarovana - Ny votoatin'ny fampielezan-kevitra dia famandrihana vitsy.
6. Flexibility - Ny fampielezan-kevitra mamitaka dia mifanaraka ary miova tsikelikely rehefa mila fiovana.
7. Fandrindrana - Ny ministera na ny fampielezan-kevitra dia niorina amin'ny endrika ambaratongam-pahefana mba ahafahana mizara fampahalalana tsy tapaka sy mifanaraka.
8. Fialan-tsiny - Manimba ny fanoherana ny vaovao.
9. Fanambarana tsy marina - Manaova ny marina.
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 17: 59
Ny lalàna manintona
Ny Lalàna momba ny Tanjon'ny Intelligence and Security Services, fantatra amin'ny anarana hoe Act of Towing, dia manome ny fampitomboana ny fomba ampiasana ny serivisy (AIVD sy MIVD). Ny fiovana lehibe indrindra dia:
- Azo antsoina hoe "fitifiran-dalamby" ny fanaraha-maso ny fifandraisana an-tserasera, ary koa ireo olom-pirenena tsy ahiahiana. Ohatra, ny mpifanolo-bodirindrina manontolo dia hihaino rehefa misy olona iray ahiahiana ao aminy.
- Azo atao daholo ny fitaovana maoderina rehetra. Eritrereto, ohatra, ny telefaona, ordinatera na televiziona tianao.
- Azo atao ny manangana tahiry ADN miafina izay ahafahan'ny olon-drehetra hiafara.
- Ny angon-drakitra voaangona dia azo zaraina amin'ny sampam-pitsikilovana vahiny, eny fa na dia tsy nodinihina aloha aza.
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 18: 19
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 21: 59
Ny mpamaky iray tao amin'ny Facebook dia nahitana fanadihadiana mahaliana momba ny hitan'ny bisik'i Anne:
hevitra fotsiny no tiako hizara. Hita ny bisik'i Anne Faber, mijoro eo amin'ny sary manohitra ny sarin'ny andriamanibavy Ceres. Ny andro fety an'io andriamanibavy io dia ny 4 Oktobra, miaraka amin'ny sorona isan-taona hanomezam-boninahitra azy. Angamba mety ho fifandrifian-javatra izany, fa te-hiteny fotsiny aho.
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 22: 03
Ary izany no mahatonga antsika ho gaga ary ny mpilatsaka an-tserasera (AI) manaparitaka ny Facebook, Google sy ny mpamatsy Big Data (fotoana tena izy) dia mamaritra ny valintenintsika. Amin'izany fomba izany isika dia miondrika mandrakariva ao amin'ny World Wide Web ary ny AI dia mianatra avy amintsika ary ny vinavina ara-tsosialy dia mihamitombo hatrany.
Squenzy nanoratra hoe:
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 22: 44
Mandehana amin'ny alalan'ny AI izay soratanao. Androany aho dia nahitako lalao tao amin'ny Facebook izay miasa manaraka ny foto-kevitra AI. Ny lalao dia novolavolaina toy izany mba hahafahany mamaky ny eritreritrao / fihetsikao. Raha efa nanao izany ny lalao dia tsy te hahalala ny halavitry ny AI ianao.
Fiarahabana sy hatsarana efa!
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 22: 16
Ny Ceres no tena zanakavavin'i Saturn, fa ankoatra izany
5 Oktobra 2017 ao amin'ny 23: 04
Toa ireny karazana tranga ireny dia samy manao karazana esoterika (asan'ny maizina) ary misy fandaharam-potoana fanombohana, noho izany dia notapahina teo amin'ny lafiny maro ny antsy fanta-daza.
Navoaka androany tao amin'ny nu.nl, ny fanadiovana vola sy ny fepetra efa noraisina:
6 Oktobra 2017 ao amin'ny 10: 56
Fangatahana am-pirahalahiana ho an'i Thijs Henkel (izay manoratra ny ankamaroan'ny lahatsoratra amin'ny pejy Facebook-n'i Nelleke bakery vadiny): Raha toa ianao ka mamoaka zavatra - toy ny Ceres ankehitriny, dia tsy mihambo ho efa nahita izany ianao ary manonona fotsiny ny loharano.
Tsy mahatsiaro ho toy ny olona izay mpinamana amin'ny horonantsary toa an'i Maarten Horst aho, izay mampiasa ny lahatsoratra na lahatsoratra ho fanoratana tsara. Tsy te hifandray amin'ny sifotra na ny charlatans aho.
Natolotr'i Maarten Horst tao amin'ny Ivontoeram-pirenena momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny tontolo iainana (RIVM) ny fampiratiana, izay nanambaràny fa nipoitra ary nanangon-karena tamin'ny uranium izy. Namoaka ity porofo ity aho tao amin'ny tranokalako ary nampiseho fa namidiny kolder (ary noho izany dia mazava ho azy).
Taloha, i Thijs Henkel dia nizara lahatsoratra maromaro (tamin'ny alalan'i Facebook navoakan'i Nelleke Bakker) mba hahazoana ny fitokisana amin'ireo mpanaraka ny vadiny (Nelleke Bakker). Ny tanjon'ity tanjona ity dia toa ny hoe 'maka olona avy any am-paosiny mba hampiasa vola ao amin'ny Vietnamese Dong' (vola ampiasain'ny olona ho resahina manerantany). Nifantoka tamin'ny tantara momba ny fianakaviana White Dragon izy
Niasa tao amin'ny RIVM i Nelleke Bakker, noho izany dia mahagaga fa navelan'i Maarten Horst ny fanontana tao. Miahiahy aho fa nilefitra i Nelleke.
6 Oktobra 2017 ao amin'ny 04: 16
Hoy i Nathanael: "Aza manomboka mitady vahaolana, aza miala amin'ny làlan'ny polisy."
Inona no faritra mihatra amin'izany? Efa voalaza ve ny fandehan-javatra manodidina ny manodidina ny andriamanibavy Ceres, izay tsy ahafahanao miala amin'ireo làlana?
6 Oktobra 2017 ao amin'ny 09: 21
Anne Faber, vehivavy manan-tsaina amin'ny 25 amin'ny bisikileta alohan'ny aloka, ny toetr'andro ratsy ary amin'ny ala iray izay efa fantatra nandritra ny taona maro ho mampidi-doza noho ireo tarehimarika voasarimakirana izay mandroba ny olona sy ny fanorisorenana ny ankizivavy. Tsy mahagaga raha mihatsaravelatsihy, fa toy ny mampihetsi-po.
truthseeker01 nanoratra hoe:
6 Oktobra 2017 ao amin'ny 11: 22
Sleepnet = mitifitra lalàna:
6 Oktobra 2017 ao amin'ny 11: 57
Ny "Sleepnet" dia mitovitovy amin'ny fanazavana momba ny "torimaso torimaso" marina.
6 Oktobra 2017 ao amin'ny 11: 29
Tena mahavariana fa i Nathan Fidder dia tsy manana havan'i Anne Faber ao amin'ny lisitry ny namany
6 Oktobra 2017 ao amin'ny 11: 35
Somary mahagaga ihany koa fa i Nathanael Fidder dia tsy tia na namaly ny sary iray (farafaharatsiny avy amin'ny tsy voaro) ao amin'ny pejy Facebook an'i Anne Faber. Raha lazainao fa namanao iray ianao dia mety hanantena zavatra bebe kokoa ...
6 Oktobra 2017 ao amin'ny 11: 54
Ny dadatoan'i Anne sy ny mpitondratenin'ny fianakaviana Henk Faber ("Hanohy foana ny lalan-dàlana toy izany") dia manana birao PR / Communication.
Henk dia manam-pahaizana momba ny sehatry ny fifandraisana.
ks_6 nanoratra hoe:
6 Oktobra 2017 ao amin'ny 12: 34
Angaha moa efa nifidy ny olona ho an'ireo karazana fomba fanao ireo ny media izay manaisotra ny fahatsapana avy amin'ny vahoaka Holandey? Midika izany fa i Anne dia vehivavy manana ny maha-izy azy miaraka amin'ny oniversite, mino aho fa izany dia manakaiky kokoa ny vahoaka amin'ny ankapobeny noho ny tsy nahitana tovovavy atsinanan'i Blind nandritra ny herinandro vitsivitsy. Jereo fotsiny ny Anjelie Basco, tsy misy olon-kafa tsy miraharaha izany. Misy rakitra amina ampahatelon'ny olona tsy hita isa isan-taona, saingy misy karazana fikarohana lehibe sy 9 amin'ny fotoana 10 izay tsy renao na inona na inona. Komr ity satria ireo no karazana tsy mankasitraka ny mpihaino holandey, tsy mahafantatra fa mifidy vehivavy tahaka an'i Anne izy ireo satria toa milaza fa manafaka ny fihetseham-po izy.
any ambanivohitra nanoratra hoe:
7 Oktobra 2017 ao amin'ny 11: 11
Voalohany indrindra, te-hitatitra aho fa mahita tantara hafahafa ihany koa hatrany am-piandohana. Iza no hiafara amin'ny bisikileta amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny fotoana toy izany? Raha tamin'ny bisikiletan'ny akanjo miaraka amin'ny akanjo fitondra, dia tantara hafa izany. Mety ho nitondra ny kitapony ve izy? Ny vaky ....
Fantatro fa nalefa tany amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny mailaka avy amin'ny sekoly iray tao Veghel ka tsy azo idirana intsony ny tale noho ny fanjavonany (ny vinantovaviny).
Manantena aho fa amin'ny fotoana rehetra dia tsy ho ela dia ho mazava ao amin'io mistery io.
« Inona no tokony hoeritreretintsika momba ny fahaverezan'i Anne Faber?
Nathan Fidder, naman'i Anne Faber, mpilalao horonantsary tao amin'ny Theater + Toneelgroep Imperium »
Total visits: 1.317.344